गुल्मीमा पहिरोले गोठ बगाउँदा गाई भैसी मरे – Gulmiews
गुल्मीमा पहिरोले गोठ बगाउँदा गाई भैसी मरे
July 31, 2015 Sanju Kauchha
गुल्मी साउन १५ । अबिरल वर्षा सगै गएको पहिरोले गोठ बगाउँदा गुल्मीको दोहोलीमा गोठमा रहेका गाई भैसी मरेका छन् । गए राती परेको पानीका कारण पहिरो जाँदा जिल्लाको क्षेत्र नं. ३ स्थित दोहोली गाविस वाड नं. ८ का शेर बहादुर खत्रीको गोठ पहिरोले बगाउँदा गोठमा रहेका सबै गाई बस्तुहरु मरेको इस्मा प्रहरी चौकीका इन्चार्ज हल्वादार पशुपती बोहराले जानकारी दिनुभयो ।
गोठ माथीबाट पहिरो आउँदा गोठमा रहेका १ हल गोरु, २ वटा ब्याउनी गाई, १ बाच्छो र १ सानो पाडी मरेको प्रहरी जनाएको छ । यस्तै गएराती एक गोठाम परेको चट्याङ्गका कारण एउटा भैसी र गाई मरेको छ । दोहोली गाबिसको वाड नं. ३ मा परेको चट्याङ्गबाट गाई र भैसी मरेको प्रहरीको भनाई छ ।
गत बैसाखमा गएको भुमक्पले हल्लाउदा जमिन कम्जोर भएकाले अबिरल वर्षासगै पहिरो जाँदा जिल्लाका बिभिन्न स्थानका धेरै घर परिवार बिस्थापित भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । वर्षा सगै पहिरो जाँदा ईस्मारजस्थल वार्ड नं. ८ मा २ वटा घरमा पहिरोले क्षती पु¥याउदा उक्त घरका मानिसहरु बिस्थापित भएका छन् । यस्तै पहिरोले घरमा जोखिम बनाउँदा पौदी अराईमा ६ घर मुसिकोटमा ३ घर बिस्थापित भएको खबर आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी नायव उपरिक्षक हिमालय श्रेष्टले जानकारी दिनुभयो ।
जोहाङ्ग खेरैनीमा पहिरो जाँदा वामीटक्सरसम्म पुग्ने बाटो अबरुद्ध भएको छ । जोहाङ्गमा गएको पहिरो हटाउने प्रयास भैरहेता पनी ढुङ्गा खसिरहेका कारण हटाउन नसकिएको श्रेष्टले जानकारी दिनुभयो । जिल्लाका बिभिन्न स्थानका पहिरोले घर जोखिम बनाउँदा घर परिवार बिस्थापित भएको भन्ने खबर आएपनी संकल कार्यभैरहेको जिल्ला प्रहरीकार्यालय गुल्मीले जनाएको छ ।